Weerar lagu soo furtay samafalayaal - BBC Somali
Weerar lagu soo furtay samafalayaal
Image caption Laba samafale ee la afduubay Jessica Buchanan iyo Paul Tisted
Ciidamada gaarka ee Mareykanka ayaa Somalia ka fuliyey weerar ay ku soo furteen laba ka mid ah shaqaalaha gargaarka oo horey ay burcda Soomaaliyeed u afduubeen.
Dhowr helicopterka oo miliateriga Mareykanka ayaa ku degey bartamaha Somalia xilli habeen ah ka dibna waxay ciidamadu weerareen xero ku taal meel miyi ah, halkaas oo kooxo hubeysan ay ku haysteen dadkan ay soo afduubeen.
Siddeed ka mid ah maliishiyada ayaa la diley.
Labada ruux ee la soo badbaadiyey ayaa xorriyaddooda dib loo soo celiyey iyaga oo aan waxba gaarin.
Waxaa loo duuliyey dalka Djibouti, halkaas oo Mareykanku ku leeyahay saldhig militeri.
Jessica Buchanan oo u dhalatey Mareykanka iyo ninka la afduubnaa Poul Thisted, oo u dhashey Denmark, waxaa la afduubay bishii October ee sannadkii hore, iyaga oo u shaqeynayey hay'adda samafalka ah ee qaabilsan miino bixinta ee Danish de-mining organisation.